Iindaba -Inkunkuma ayifuni, ayifuni: Yimalini ukupakisha inkunkuma eninzi kakhulu?
Ukupakisha kufuneka: khawufane ucinge ilizwe elingenayo.
Bekusoloko kukho uhlobo oluthile lokupakisha kwaye luya kuhlala lukhona, kodwa ngaba ikhona indlela yokuba siyeke inani longcoliseko kunye nenkunkuma eveliswa kwezi zinto zibalulekileyo zobomi? Siwubeka phi umgca wokuvuma ukwamkela ubunyani bokupakisha inkunkuma ebomini bethu?
Enye yezona zinto zininzi zokupakisha zizinto ezisongelayo ezinokuba yityhefu enkulu ekuziveliseni. Ikwomelele kakhulu eyenza ukuba kube nzima kuyo ukubola ukuba ayiphinde isetyenziswe. Kwaye, inyani kukuba, ayizizo zonke iinkampani ezirisayikilisha, endaweni yokuba inkunkuma yazo zipakishwe yinkampani yomntu wesithathu. Ungathini xa uninzi lwaba bavelisi kunye nabasasazi bebeqala ukuphinda basebenzise iiplastikhi, iphepha kunye nekhadibhodi? Abayi kugcina imali kuphela, baya kunceda nokugcina okusingqongileyo kwizinto ezingcolisayo eziyingozi.
Okanye banokufumana enye indlela yokusonga kunye nezinye izinto zokupakisha ezivelisa eyona nkunkuma. Into enokubambela inokubambelela endaweni ebambekayo ethintela ukutyibilika kweemveliso xa zigcinwe kwiipelethi. Ezinye zezi zinto zinamathelayo zisenokuba zitshiphu kunokuzisongela. Banokuvelisa ungcoliseko oluncinci lokuvelisa. Iintambo ze-bungee ezinokuphinda zisebenze zinokwenza iqhinga lokutshintsha isongelo ngelixa usabambe iimveliso endaweni yazo. Kukho amagwebu athile adla ngokubola xa emanzi. Oku kulungele imeko-bume, kodwa mhlawumbi ayilunganga kangako ukuhambisa okanye ukugcina.
Njengoko i-eco-friendly njengokurisayikilisha inkunkuma yokupakisha inokubonakala, ayisiyiyo kwaphela eluhlaza. Ukuze uphinde usebenzise iphepha kunye nekhadibhodi, amaphepha axutywe namanzi ukwenza i-pulp njengesiyobisi. Oku kuyenza buthathaka imicu ukwenzela ukuba izinto ezirisayikilishelwe ziqine, iichips zeenkuni zongezwa kumxube wepulp kunye nezinye iikhemikhali ezisusa ukungcola.
Ukuba awukwazi ukuphinda usebenzise izinto zakho zokupakisha, zama ukuthenga izinto ezinokuboliswa ziintsholongwane ukuze zikwazi ukubola ngokulula xa zilahliwe okanye ufumane iimveliso ezinokusetyenziswa kaninzi, ezinje ngeebhegi zomoya kunye namandongomane okupakisha. Ukunciphisa ukupakisha inkunkuma kufanele kube yinto ephambili kwiinkampani ezivelisa ezininzi. Ngamanye amaxesha kunokuthatha ixesha kwaye kuyadinisa, kodwa, ekugqibeleni, uMama Wendalo uyakubulela.